ရယ်လိုက်ရင် အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်တာမို့ အကယ်ဒမီဆုကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ဦးပါ။ သူမကိုအရမ်းချစ်တဲ့ ဖူးစာရှင်အစစ်အမှန်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ လတ်တလောမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဏကြီးရဲ့ ချစ်တတ်လွန်းတဲ့ အ​ကြောင်းတွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ချစ်စနိုးလေး ထုတ်ပြောလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာကတော့ ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံကို သဘောကျသူတွေအကုန်လုံး ကြည်နူးမိစေမှာ အသေအချာပါပဲနော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့အလုပ်ထိခိုက်မှာစိုးလို့ အလိုက်တသိနဲ့ နားလည်မှုပေးတတ်လွန်းတဲ့ ခင်ပွန်းအကြောင်းပြောလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့အကြောင်း ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ “Bon Voyage ဦးရေခဲ ❤️ဒီနေ့သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင် Busan ASEAN film weekမှာပြခွင့်ရလို့ သူကိုရီးယားကိုသွားရတဲ့နေ့ 🥰မြန်မာဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူရဲ့ပွဲဦးထွက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို Busan ASEAN film weekလိုမျိုးမှာပြခွင့်ရတာ သူဂုဏ်ယူရှာမှာပေါ့….အဲဒါကို မနေ့က congratulations boo bear ဆိုပြီး post လေးတစ်ခုတင်ခဲ့တာကလွဲလို့ ကိုယ်အဲဒီပွဲအကြောင်းလည်းသူ့ကိုသေချာမမေးခဲ့မိဘူး….ဒီမနက်လည်းသူက ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ plan ကိုမေးတဲ့အခါ မနက်မှာနောက်ရိုက်မဲ့ကားအတွက်ကန်တော့ပွဲသွားရမယ် ညနေမှာကြော်ငြာဓါတ်ပုံရိုက်ရှိတယ်လို့ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့၃/၄ရက်ကတည်းကသူ့ကိုပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြေခဲ့တယ်….သူက”နေ့လယ်ဝတုတ်လူဆိုးအား‌လောက်တဲ့အချိန်ကျနော်ဖုန်းဆက်မယ်နော်” ဆိုတော့ကိုယ့်မှာဖုန်းဆက်တာဘာဆန်းလို့လဲမသိဘူးဆိုပြီးကြောင်တောင်တောင်နဲ့ “အင်း ဆက်လေ” လို့ပဲပြန်ဖြေခဲ့တာ….
ကန်တော့ပွဲရောက်မှ media တွေက Busan မှာသူ့ရုပ်ရှင်ပြခွင့်ရတဲ့အကြောင်းဝိုင်းမေးကြတာရော သူ့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကသူ့အတွက်တခုတ်တရတင်ပေးကြတဲ့ post တွေကိုပါမြင်မှ it’sabig deal for him ဆိုတာကို သတိထားမိတဲ့အဖြစ်….ကန်တော့ပွဲပြီးပြီးချင်း သူ့ကိုဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး သုသုနေ့လယ်အားသွားပြီ ညနေမှကြော်ငြာရိုက်ရှိတာ(အမှန်တော့ ပွဲတက်တွေအတွက် fitting ချစရာရှိတာတွေကို နည်းနည်းရွှေ့လိုက်တာ) ဘာပြောချင်လို့လဲဆိုတော့ “အားသွားပြီဆိုရင် ကျနော်ဟိုမှာဝတ်ဖို့နည်းနည်းထူတဲ့အနွေးထည်သွားဝယ်တာ လိုက်ကြည့်ပေးမလား” တဲ့….အမှန်တော့ ပြီးရင်လည်းသူကြိုက်တာပဲသူဝယ်မှာဆိုပေမယ့် သူ့မိန်းမကဂရုတစိုက်လိုက်ဝယ်ပေးတယ်ဆိုတာလေးကိုသူလိုချင်ရှာတာပေါ့နော် ❤️”ပြီးတော့ ကျနော့လေယာဉ်ပျံချိန်က ည၁၁:၃၀မှ ဝတုတ်လူဆိုးကြော်ငြာရိုက်ဘယ်အချိန်ပြီးမှာလဲ”တဲ့…အမှန်ဆိုလေဆိပ်လိုက်ပို့ပေးလို့ပြောရင်ရတာပဲကို….ကြော်ငြာရိုက်ချိတ်ဖို့လုပ်နေကတည်းကအဲ့နေ့ကျနော့်ကို လေဆိပ်လိုက်ပို့ပေး အလုပ်ကိုတခြားနေ့ချိတ်လို့ပြောလို့ရတာကို….ဦးရေခဲဟာလေ အမြဲတမ်းသုသုရဲ့ career ကိုသူ့ကြောင့်ထိခိုက်မှာအမြဲစိုးရိမ်ခဲ့ပေးတယ်….
သူ့ရဲ့အိမ်ရှင်မဆိုတဲ့နေရာကိုယူလိုက်လို့ သုသုချစ်တဲ့အလုပ်လေးမှာထိခိုက်သွားတာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ရအောင်သုသုကိုဦးစားပေးခဲ့တယ်….အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက အိမ်မှာ၁ပတ်ပြည့်အောင်ဆက်တိုက်မနေဖူးပဲအမြဲနယ်လှည့်ကားရိုက်နေတဲ့သူ့မိန်းမကိုတစ်စက်ကလေးမှမငြိုငြင်ခဲ့ဘူး…သုသုရဲ့ပျက်ကွက်မှုတွေအားလုံးကို အစွမ်းကုန်နားလည်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ဦးရေခဲရယ်….အတ္တကင်းစွာနဲ့ ရှင့်ရဲ့ဝတုတ်လူဆိုးကိုချစ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ 🥰🥰🥰ဘာရယ်မဟုတ် ကံကောင်းထောက်မစွာ shooting စောစောပြီးသွားလို့ ဦးရေခဲကိုလေဆိပ်လိုက်ပို့ပေးဖြစ်လို့ သူတန်းစီနေတာကိုကြည့်ရင်း ဒီစာကိုစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတင်လိုက်တာ….ရည်းစားသက်တမ်း၅နှစ် အိမ်ထောင်သက်၁နှစ်နီးပါးမှာတစ်ခါမှသူ့အတွက် appreciation post မတင်ဖူးဘူးလို့ post အရှည်ကြီးနဲ့ appreciate လုပ်လိုက်သည် ❤️❤️❤️I love you so much Boo Bear 🥰” ဆိုပြီး အလိုက်သိလွန်းပြီး သူမကိုချစ်တတ်လွန်းတဲ့ ခင်ပွန်းကို အရမ်းချစ်ကြောင်း ပြောထားတာပါ။
ဖူးစာမှန်ရင် ရှောင်လွဲလို့ မရဘူးဆိုတဲ့စကားက အမှန်ပဲမို့ သုသုလေးလည်း သူအရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲသွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုတို့ နှစ်ဦးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့က စေ့စပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း အသက် ဆယ်နှစ်နီးပါးကွာပေမယ့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အချစ်တွေအပြည့်နဲ့ ဘဝကိုရှေ့ဆက်နေကြတဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့နှစ်ဦး ကိုချစ်ရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။